Thu, Jul 2, 2020 at 10:20pm
एजेन्सी, २५ वैशाख अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्टक मरिसनका टाउकामा अन्डा प्रहार भएको छ । दुईसाता पछि हुने आम निर्वाचनको अभियानमा व्यस्त रहेका मरिसनका टाउकामा एक युवतीले अन्डा प्रहार गरेकी हुन् । अन्डा प्रहार भएका बेला प्रधानमन्त्री मरिसन महिलाहरुको एक समूहसँग छलफलमा व्यस्त थिए । अन्डा प्रहार गरेलगत्तै ती युवतीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । युवतीले प्रधानमन्त्री मरिसनको टाउकोमा अन्डा प्रहार गरेपनि अन्डा नफुटी भूइँमा..
एजेन्सी, २४ वैशाख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनबाट आयात हुने थप २ सय अर्ब डलरका सामानमा पनि २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका छन्। यसअघि सन् २०१९ को सुरूदेखि नै उक्त कर लगाउने बताएका ट्रम्पले व्यापार वार्ता सकारात्मक दिशातिर गएको भन्दै मिति पर सारेका थिए। चीनसँगको जारी व्यापार वार्ता निकै धिमा गतिमा चलिरहेको र चीनले ‘रिनेगोसियट’ गर्न खोजेको भन्दै ट्रम्पले आगामी शुक्रबारदेखि ती..
काठमाडौं, २४ वैशाख । ब्रिटेनका राजकुमार ह्यारी र मेगन मार्कलको पहिलो सन्तानको रूपमा छोराको जन्म भएपछि शाही दम्पतिलाई विश्वभरबाट बधाईको ओइरो लागेको छ । राजकुमार ह्यारीले आफूले कल्पनै नगरेको सुखद अनुभूति भएको बताएका छन् । बच्चाको जन्म स्थानीय समय अनुसार सोमवार साँझ ५ बजेर २६ मिनेटमा भएको हो । केन्सिङ्गटन प्यालेसले ड्युक र ड्चेज अफ क्याम्ब्रिज खुशी भएको र बच्चालाई भेट्न लालायित भएको बताएको..
एजेन्सी, २४ वैशाख अल कायदाका संस्थापक ओसामा बिन लादेन अमेरिकी सेनाद्वारा पाकिस्तानमा मारिएको आठ वर्ष भइसकेको छ। हजारौँ लडाकूहरू रहेको बिन लादेनले नेतृत्व गरेको सङ्गठन संसारकै सबैभन्दा खतरनाक जिहादी समूह मानिएको थियो। अल कायदासँग राम्रो आर्थिक स्रोत रहेको पनि विश्वास गरिन्थ्यो। तर बिन लादेनको मृत्यु र इस्लामिक स्टेट आइएस समूहको जन्मपछि अल कायदाको शक्ति र प्रभाव धेरै नै घटेको थियो। अहिले अल कायदाको अवस्था के..
सोफिया, २२ बैशाख : इसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिस आइतबार बुल्गेरिया आइपुग्नुभएको छ । उहाँले बुल्गेरियामा रहेका सानो क्याथोलिक समुदायसँग भेटघाट गर्नुहुनेछ । बुल्गेरियाका प्रधानमन्त्री बोयको बोरिसोभले पोपलाई बिमानस्थलमै पुगेर स्वागत गर्नुभएको थियो । सन् २००७ मा युरोपेली युनियनमा प्रवेश गरेको पूर्व कम्युनिष्ट शासित बुल्गेरियामा पोपको भव्य स्वागत गरिएको थियो । तीन दिने उक्त भ्रमणका क्रममा उहाँले उत्तरी म्यासेडोनियाको पनि भ्रमण गर्नुहुनेछ । मेसेडोनियाको..
सुभा, २३ बैशाख । दक्षिण प्रशान्त महासागरीय मुलुक फिजीको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक फिजी एयरवेजले बोइङ ७३७–८०० बिमानको उडान स्थगित गरेको छ । कम्पनीले गत महिना मियामी एयरबाट उक्त जहाज भाडामा लिएको थियो । मियामी एयरले सञ्चालन गरेको यही मोडेलको बिमान अमेरिकाको ज्याक्सनभिल्ले बिमानस्थलमा शुक्रबार राति अवतरण गर्नेक्रममा चिप्लिएर नदीमा झरेपछि फिजी एयरले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ । फिजी एयरका एकजना प्रवक्ताले फ्लोरिडाको उक्त..
तेहरान, २२ वैशाख । इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीका भाई हुसेन फेरेडोउनलाई अनिश्चितकालिन जेल सजायको फैसला भएको छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा हुसेनलाई सजाय स्वरुप अनिश्चितकालिन जेल सजायको फैसला सुनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम अल जजिराले जनाएको छ । “कतिपय आरोपमा उनीबाट गल्ती नभएको देखियो, तर अरु धेरै आरोपहरु पुष्टि भएकाले उनलाई कारागार राख्न आदेश दिइएको छ,” अदालतका एक जना कर्मचारी हमिद्रेज होसेनीले शनिबार बताएका छन्..
टोकियो, २१ वैशाख । जापानका नयाँ राजा नारुहितोले विश्व शान्तिका लागिसँग सगै काम गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । राजामा नियुक्त भएपछिको पहिलो सम्वोधन गर्दै शनिबार उहाँले सवै देशहरुसँग हातमा हात मिलाएर अगाडी बढ्न आफूले चाहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “म गम्भिरतापूर्वक आग्रह गर्दछु कि, विश्व शान्ति र बाँकी विकासका लागि सवै देशहरुले सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । जापानका १२६ औँ राजा..
काठमाडाैं, २१ वैशाख बेलायतमा बिहीबार सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली मूलका ४ उम्मेदवार विजयी भएका छन् । स्थानीय अल्डरसट टाउन काउन्सिलमा प्रवेश केसी, मेडस्टोन काउन्सिलमा दिनेश खड्का, हेमल हेम्पस्टिडमा गोवर्द्धन (सागर) सिलवाल र कोलबर्न टाउनमा डा. जगन्नाथ शर्मा काउन्सिलर निर्वाचित भएका हुन् । बेलायतका विभिन्न क्षेत्रबाट काउन्सिलरको दौडमा रहेका नेपाली समुदायका अन्य उम्मेदवार भने पराजित भए । बेलायतमा धेरै नेपाली बस्दै आएको अल्डरसटमा केसी..
वासिङटन, संयुक्त राज्य अमेरिका, २० वैशाख । रोजगारी सिर्जनाका हिसाबले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि अप्रिल महिनाले पनि व्यापक सफलताको सन्देश प्रवाह गरेको छ । अमेरिकामा सन् १९६९ पछि अर्थात् विगत ४९ बर्ष यता पहिलो पटक बेरोजगार दर यस बर्ष न्यून विन्दुमा झरेको सरकारद्वारा शुक्रबार जानकारी गराइएको छ । रोजगार दरमा देखिएको वृद्धिको सफलतासँगै चीन–अमेरिका व्यापार विवादका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रमा कमी आउनसक्ने कतिपयको अनुमान..
काबुल, २० बैशाख । अफगानिस्तानको काबुलमा सम्पन्न ऐतिहासिक “लोया जिर्गा” (विशेष परिषद) बैठकले तत्कालै स्थायी युद्धबिराम गर्न आह्वान गरेको छ । राष्ट्रपति अश्रफ घानीले परिषदको आह्वानलाई शर्तसहित कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ । यसै साता बसेको लोया जिर्गा बैठकमा अफगानिस्तानका करिब तीन हजार २०० प्रतिनिधि सहभागी थिए । बैठकमा धार्मिक तथा आदिवासी नेताहरु, राजनीतिक नेताहरु र दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । करिब १८..
वासिङ्टन, १९ वैशाख भेनेजुएलामा जारी राजनीतिक विद्रोहमा अमेरिकाले सैनिक हस्तक्षेप गर्ने भनिएको विपषयमा यहाँका अधिरकारीहरुको मत विभाजन भएको छ । बताइएअनुसार यहाँ सैनिक हस्तक्षेप गर्नेबारेमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । केही अधिकारीले यहाँ राजनीतिक समाधानमा जोड दिएका छन् भने कतिपय अधिकारीहरु भने यहाँको विवाद समाधानका लागि अमेरिकाले सैनिक पठाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् । बुधबारका अमेरिकी छापाहरुमा यस विषयमा अमेरिकी प्रशासन राष्ट्रिय..
काठमाडौँ, १९ वैशाख भारतको पूर्वीय तटवर्ती क्षेत्रबाट सामुद्रिक आँधी आउन लागेको आशङ्कामा त्यस क्षेत्रका करिब ८ लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थलतर्फ सारिएको छ । सामुद्रिक आँधी २ सय किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आउन लागेको अनुमान मौसमविद्हरुले गरेका सरकारी अधिकारीहरुले बिहीबार जानकारी दिएका छन् । भारतको प्रकोप नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरुले एएफपी समाचार समितिलाई उडिसा राज्यको कम्तीमा १३ ओटा जिल्लाका ७ लाख ८० हजार व्यक्तिलाई आँधीले..
एजेन्सी, १९ वैशाख । थाइल्याण्डका राजाले आफ्नो सुरक्षाका लागि खटिने टिमकी कार्यकारी प्रमुख सुथिदासँग विवाह गरेका छन् । ६६ वर्षका राजा माहा वाजिरालङकोर्नले आफ्नो बडिगार्डसँग विवाह गरेकी हुन् । राज्याभिषेकको तीन दिनअघि थाई नरेश महाबजिरालोङकोरनले आफ्नै अगंरक्षकसँग चौंथो बिहे गरेका छन् । ६६ बर्षीय नरेशले ४० बर्षीया सुथिदासँग बुधबार बिहे गरेको थाई राजदरबारले जनाएको छ । सुथिदाले राजाको विशेष सुरक्षा दस्तामा रहेर लामो..
भेनेजुएला, १९ बैशाख । भेनेजुएलाका विपक्षी नेता ख्वान ग्वाइदोले निरन्तर हडताल र विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेका छन्। विपक्षी समर्थक प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी फौजसँग हिंसात्मक झडपहरू भएको भोलिपल्ट बुधवार पुनस् ठूला प्रदर्शन जारी राखे । साथै सरकार समर्थकहरूले पनि प्रदर्शन गरेका छन्। भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोले विपक्षी नेता ग्वाइदोले गराउन खोजेको सैन्य विद्रोह विफल पारिएको दाबी गरेका थिए। निरन्तर हडताल राष्ट्रपति मदुरोले आफ्ना समर्थकलाई सडकमा भेला भएर विपक्षीको..
एजेन्सी, १८ वैशाख । अमेरिका र युरोपेली संघको साथ पाएका स्वघोषित अन्तरिम राष्ट्रपति तथा विपक्षी नेता हुँवाले मंगलबार राष्ट्रपति निकोलास मादुरोको शासन समाप्त हुने बताएका थिए । राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको भेनेजुयलमा राष्ट्रपति मादुरो समर्थक सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि गाडी कुदाएका छन् । गोइदोको आह्वानमा त्यहाँ प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनले हिँस्रक रुप लिएपछि सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि गाडी कुदाएका हुन् । उनले आफूलाई देशको सेनाको साथ भएको दाबी..
टोकियो, १८ बैशाख । जापानका सम्राट नारुहितोले मङ्गलबार मध्यरातबाट जापानको राजगद्दी सम्हाल्नुभएको छ । उहाँ जापानी राजतन्त्रको इतिहासमा राजगद्दी सम्हाल्ने १२६औं राजा हुनुभएको छ । शाही निसान र छाप हस्तान्तरण गर्ने विशेष समारोहमा उहाँलाई मङ्गलबार राति जापानी राजपरम्परामा विशेष महत्व राख्ने एउटा तरबारको प्रतिक, एउटा बहुमूल्य रत्न दिइएको थियो । उक्त समारोहमा पूर्व सम्राट अकिहितोको पनि उपस्थिति थियो । राजगद्दीमा आसिन भएपछि पहिलो..
सियोल, १८ बैशाख । प्रतिकूल मौसमका कारण चरम खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएपछि उत्तर कोरियाले रेडक्रस समक्ष आपतकालीन सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनमा उत्तर कोरियाले केही वर्षदेखि विषम खडेरीको सामना गर्नु परेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१४ देखि २०१७ सम्मको खडेरीले उत्तर कोरियामा चरम खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको जनाइएको छ । गत वर्ष चलेको तातो हावा..
कोलोम्बो, १६ बैशाख । गत साता श्रीलङ्कामा भएका शृङ्खलाबद्ध आत्मघाती विस्फोटनपछि सरकारले अनुहार छोपिने खाले सबै प्रकारको कपडा लगाउनको लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । गत हप्ता तीन चर्च र तीन होटलमा भएका आतङ्ककारी आक्रमणपछि २ सय ५० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएपछि अनुहार छोप्ने बुर्का जस्ता पहिरनलाइ सोमबारबाट लागू हुने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको श्रीलङ्का सरकारले आइतबार घोषणा गरेको छ । सोमबारदेखि लागू हुने..
अमेरिकाद्वारा भेनेजुएलामाथि तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध, आजदेखि सक्रिय
वासिङ्टन, १५ बैशाख । भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रुपमा रहेको खनिज तेलको निर्यातमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध आइतबारदेखि लागू भएको छ । बामपन्थी राष्ट्रपति निकोलास मदुरोको शासन विरुद्ध उभिएको संयुक्तराज्य अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तेल आयात रोक्ने यसअघि नै निर्णय गरेको थियो । संयुक्तराज्य अमेरिकाले भेनेजुएलाको राज्य नियन्त्रित पेट्रोलिओस डी भेनेजुएला (पीडीभीएसए) वा भेनेजुएला सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी रहेका कुनै पनि निकायबाट..
शंकास्पद आक्रमणकारीसहित श्रीलङ्कामा पन्ध जना मारिए
कोलम्बो, १४ वैशाख सुरक्षा निकायले गरेको सुरक्षा कारबाहीका क्रममा श्रीलङ्कामा १५ जना मारिएका छन् । सुरक्षा अधिकारीहरुले शनिबार दिएको जानकारीअनुसार शुक्रबार राती भएको सुरक्षा कारबाहीमा परी मारिनेमा छ जना बालबालिका र तीन जना महिला समेत रहेका छन् । शंकास्पद व्यक्तिहरु लुकेर बसेको सूचनाका आधारमा सुरक्षाकर्मीहरुले घेराहालेर आक्रमण सुरु गरेपछि दोहोरो भिडन्त भएको प्रहरीले जनाएको छ । “देशको पूर्वी ठाउँ काल्मुनाइमा भएको भिडन्तमा परी मृत्यु..
उत्तर कोरियाली नेता किम स्वदेश फिर्ता, रुसी राष्ट्रपति चिनतर्फ
भ्लादिभोस्तक, १३ बैशाख उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–अन शुक्रबार रुसको सुदूरपूर्वी तटीय शहर भ्लादिभोस्तकबाट स्वदेश फर्किनुभएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा उत्तर कोरियाली नेता किम बुधबार निजी रेलमा चढेर रुसको भ्लादिभोस्तक पुग्नुभएको थियो । रुसी राष्ट्रपति भ्लालिमिर पुटिन र नेता किमबीच द्वीपक्षीय हितलगायतका विषयमा भएको सम्मेलनपछि किम शुक्रबार त्यहाँबाट फकिर्नु भएको छ । भ्लादिभोस्तक रेल स्टेशनबाट किम ग्रीनबीच समयानुसार..
ट्रम्पलाई टक्कर: पूर्व उपराष्ट्रपति बिडेनद्वारा राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी
वासिङ्टन, १३ बैशाख ः अमेरिकाका पुर्व उपराष्ट्रपति जोए बिडेनले आगामी निर्वाचनमा आफूले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ । वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सन् २०२० मा टक्कर दिनका लागि अहिलेसम्म देखिएकामध्ये डेमोक्र्याटतर्फका उहाँ एक शसक्त नेता मानिनुहुन्छ । अत्यन्त अनुभवी र चिरपरिचित तथा लोकप्रिय ७६ बर्षीय नेता विदेन पछिल्ला मत सर्वेक्षणहरुमा पनि अगाडि देखिनुभएको छ । ट्वीटरमार्फत् साढे तीन मिनेटको भिडियो सार्वजनिक गर्दै उहाँले..
श्रीलङ्कामा पुनः बम बिस्फोट, मृत्यु हुनेको संख्या ३ सय ६० पुग्यो
कोलम्बो, १२ बैशाख श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोबाट पूर्वतर्फको बाहिरी इलाकामा बिहीबार पुनः बम बिस्फोट भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । स्थानीय समयानुसार बिहीबार भएको यस बम आक्रमणबाट कुनै मानवीय हताहतको खबर प्राप्त नभएको पनि प्रहरीले बताएको छ । गत आइतबार तीन वटा पाँचतारे होटल र तीन वटा गिर्जाघर (चर्च)मा भएका शृङ्खलाबद्ध बम बिस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या बिहीबार मध्यान्हसम्म ३६० जना पुगेको छ । मृत्यु..
कोलम्बो, ११ बैशाख श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले तत्काल राजीनामा दिन प्रहरी र सेनाको नेतृत्वलाई आदेश दिनुभएको छ । देशका विभिन्न ठाँउमा भएको विस्फोटनमा परी सयौँको मृत्यु भएपछि त्यसको जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन उहाँले प्रहरी प्रमुख पुजिथ जयसुन्दर र रक्षा सचिव हेमासिरि फेर्नान्डोलाई आदेश दिनुभएको हो । राष्ट्रपति सिरिसेनाले घटना लगत्तै केही दिनअगाडि नै एउटा बैठकमा उनीहरुलाई राजीनामा दिन आदेश दिनुभएको सरकारी अधिकारीहरुले बुधबार..
श्रीलङ्का आक्रमणः मृत्यु हुनेको संख्या ३ सय ५९ पुग्यो
कोलम्बो, ११ बैशाख श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोका तीन वटा पाँचतारे होटल र दुई वटा गिर्जाघर (चर्च) मा गत आइतबार भएका शृङ्खलाबद्ध बम बिस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या बुधबार मध्यान्हसम्म ३ सय ५९ जना पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा भारतीय, अमेरिकी, बेलायती, जापानी समेतका ३७ जना विदेशी नागरिक रहेको श्रीलङ्काको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । बिस्फोटबाट करिब ५०० व्यक्ति घाइते भएका छन् । उपचार..
पैसा र बल प्रयोग गन खोजेको आरोपमा भारतमा लोकसभाका उम्मेदवार नै पक्राउ
पिपिली, १० वैशाख भारतमा विभिन्न चरणमा भइरहेको लोकसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका एक जना आकाङ्क्षीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विजु जनता दल (विजेडी) का तर्फबाट पिपिली निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका प्रदीप महारथीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । निर्वाचनमा पैसा र बल प्रयोग गन खोजेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । उडिसा प्रदेशको २१ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने १४७..
फिलिपिन्समा भूकम्प : ५ जनाको मृत्यु, उद्धार कार्य प्रभावित
मनिला, ९ बैशाख राजधानी मनिलामा समेत धक्का महसुस हुनेगरी उत्तरी फिलिपिन्सको जाम्बालेसलाई केन्द्र बनाएर ५.७ म्याग्नीच्यूडको भूकम्पका कारण दुई भवन भत्किँदा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् । “भूकम्पपछि परिचालित सुरक्षाकर्मीको उद्धार टोलीले उत्तरी फिलिपिन्सको पोराक शहरमा भवनको भग्नावशेषमा फसेका तीन शवलाई निकालिसकिएको र लुबाओ शहरमा भवनको भग्नावशेषमा दुई मृत शरिर फसेका छन्,” एबीएस–सीबीएन टेलीभिजनले प्रान्तीय गभर्नर लिलिया पिनेडालाई..
इरानी तेल आयातमा दिइएको छुट अन्त्य गर्ने अमेरिकाको तयारी
वासिङ्टन, ९ बैशाख संयुक्तराज्य अमेरिकाले इरानी खनिज तेलको आयात रोक्न अन्यथा प्रतिबन्धको सामना गर्न आयातकर्ताहरुलाई चेतावनी दिने तयारी गरेको छ । अमेरिकाले यससम्बन्धी घोषणा स्थानीय समयअनुसार सोमबार गर्ने अपेक्षा गरिएको ह्वाइट हाउस स्रोतले जनाएको छ । अमेरिकी तयारीबारे समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धिसँगै सन् २०१९ मा तेलको मूल्य सबैभन्दा उच्च विन्दुमा..
श्रीलङ्का आक्रमण: मृतकको सङ्ख्या २९० पुग्यो, कर्फ्यू हट्यो
काठमाडौँ, ९ वैशाख । आइतवार श्रीलङ्कामा भएको शृङ्खलाबद्ध विस्फोटनमा मारिनेहरूको सङ्ख्या २९० पुगेको छ। प्रहरीले २४ जनालाई गिरफ्तार गरे पनि सरकारले आक्रमणकारीको पहिचान गरेको छैन। आक्रमणमा ५०० जना घाइते भएको र दर्जनौं विदेशीहरू मारिएको बताइएको छ। आक्रमणलगत्तै श्रीलंकाभर लगाइएको कर्फ्यू सोमबार बिहानबाट हटाइएको छ । यद्यपि घटनापछि सामाजिक सन्जालमा लगाइएको प्रतिवन्ध कायमै छ । प्रहरीले शंकास्पद २४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको..
Results 1601: You are at page 23 of 54